Hodan Naaleeye oo ku dhimatay Weeraradii Kismaayo ka dhacay. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hodan Naaleeye oo ku dhimatay Weeraradii Kismaayo ka dhacay.
Hodan Naaleeye oo ku dhimatay Weeraradii Kismaayo ka dhacay.
Alaha u naxariistee waxaa weerarkii lagu qaaday hotelka cascaseey ee Magaalada Kismaayo ku dhimatay gabar Somali-Candian ahayd oo lagu Magacaabo Hodan Naaleeye bulshada Soomaaliyeedna ay si wayn u yaqaaneen, Hodan Naaleeye waxay ahayd weriye ka shaqaysa in bulshada ay usoo bandhigto quruxda Dalkeeda hooyo ee Soomaaliya.
” Waxaan ku lugaynayaa Janada ” waa mid ka mid ah qoraaladii ay soo gelisay baraha bulshada ka hor inta aysan geeriyoon, Hodan waxay ku kortay Wadanka Canada halkaas oo ay wax ku baratay. Waxay ka mid ahayd aasaasayaasha Telefishen Online laga daawado oo lagu Magacaabo Integration Tv. Warbaahintaan oo lagu tabiyo luuqada Ingiriiska ayaa waxaa si dhaw ugu xirnaa shacab tira badan oo ku nool Dalalka reer Galbeedka iyo Daafaha Aduunka.
” Hadda labo wiil ayaan korinayaa, Af-Soomaali kuma hadlaan, Anigiiba hadaan af-Soomaali si fiican u baranayaa, Maxaa soo socda Jiilasha Kale” ayay tiri Marxuumad Hodan oo ka hadlaysa siday u rabto inay ummada Soomaaliyeed wax uga bedesho.
Hodan Naaleeye oo u wareegtay Kismaayo waxay halkaas kula nooleed saygeeda Alaha u naxariistee Jaamac Fariid oo wasiir kasoo noqday Jubaland. Isaguna goobta weerarka lagu qaaday ayuu kula dhintay.
Geerida Hodan Naaleeye waxaa ka tacsiyeeyey dad tiro badan oo aduunka ku kala nool kuwaas oo ay ka mid yihiin Wasiirka Socdaalka Canada Axmed Xuseen, Wasiiro iyo Xildhibaano heer Maamul iyo Mid Federaal oo ka tirsan Dawlada Soomaaliya, Weriyayaal Caan ah, Siyaasiyiin kala duwan, Madax ka tirsan Dawladaha Afrika, Dhalinyaro iyo shacab tira badan.
Hodan waxay ahayd hooyo haysata Labo Caruur kuwaas oo ah Wiilal, Mar ay sharaxaysay Wax lagu xasuusto inay jiraan waxay tiri ” Markii Youtube iyo Google la geliyo Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed haday wax wanaagsan soo baxaan intaas igu xasuusta “
Horseed Media elehada, Qaraabada iyo Ummada Soomaaliyeed waxay uga tacsiyaynaysaa geeridaas Xanuunka Badan.